အလုပ် မြန်မာ - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်အကိုင်များ
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ 1
လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း 1
ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 1
အလုပ် 18 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ | Engineer (Electrical)
Naydana Group of Companies
တောင်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
၁။ Auto Cad 2D (or) 3D ထိရေးဆွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၂။ 11kv ဓာတ်အားလိုင်းများလုပ်ကိုင်ဘူး သူဖြစ်ရမည်။ ၃။ Site M & E Estimate တွက်ချက်နိုင်ရမည်။ ၄။ Plumbing & Sanitary လုပ်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Enjoyable work environment
Power Project Supervisor
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
• Power subcontractors များကို ကြီးကြပ်ရန်နှင့် ဓာတ်အားစီမံကိန်းအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ • Telecom Grid Power ၊ ဘက်ထရီ နှင့် Telecom ပါဝါစနစ်တွင် လက်တွေ့ကျသော အတွေ့အကြုံများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမည်။ • ပရောဂျက်နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ရန် ပရောဂျက်မန်နေဂျာအား ကူညီပေးပါ။ • လိုအပ်ပါက Electrical Design တွက်ချက်နိုင်ရမည်။ • supplier, vendors and customersများနှင့် အဆင်ပြေစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ • electrical projectsများကို အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးအောင် တာဝန်ယူနိုင်ရမည်။ • ပရောဂျက်တိုးတက်မှုအတွက် ပရောဂျက်မန်နေဂျာထံ နေ့စဉ်နှင့် အပတ်စဉ် အစီရင်ခံတင်ပြပေးရမည် • telecom power infrastructure နှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတသိသောသူ/ ရင်းနှီးသောသူ ဖြစ်ရမည်။
NOC procedure များအား ကြီးကြပ်ခြင်း၊ procedure အသစ်များအား ပြင်ဆင်ကျင့်သုံးခြင်းတို့ကိုလုပ်ရမည်။ ကွန်ယက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် trouble ticket handling တို့အတွက် O&M technician များကိုကူညီပေးရမည်။ ပုံမှန်၊ အထူးအစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်ခြင်း၊ 24/7 network surveillance, monitoring တို့ကိုထမ်းဆောင်ရမည်။ Trouble tickets များ၊ preventive နှင့် corrective အချိန်ဇယားများအတွက် O&M technician များထံပုံမှန် follow up လိုက်ပြီး feedback များရယူပေးရမည်။ အချက်အလက်များစုဆောင်း၍ လိုအပ်သောအစီရင်ခံစာများ ပြင်ဆင်ပေးရမည်။ client များ၊ sub-con များနှင့်ပုံမှန်ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ဖုန်းဘေလ်၊ ဘောနပ်စ်
Recruiter active 13 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
O&M Coordinator (Regional)
O&M Coordinator (Regional) - JD အရေးပေါ်ပြသနာများအား သတ်မှတ်ထားသော SLA အတွင်းဖြေရှင်းနိုင်ရန် NOC နှင့် Field Technician များအားပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်။ RCA report ပြင်ဆင်ရာတွင်ကူညီပေးရမည်။ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၊ အပြင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အမြဲမပြတ်အဆက်အသွယ်ရှိနေရမည်။ Telecom system installation, maintenance, operation ကိစ္စများအတွက် စီစဥ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်ပြသခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ Site အသစ်လက်ခံခြင်း၊ အဖွဲ့တာဝန်ခွဲဝေခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်းတို့တွင် ကြီးကြပ်ရေးမှူးအားကူညီပေးရမည်။ Field technician များ၎င်းတို့၏တာဝန်များပြီးမြောက်စေရန်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းမှီစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။ စီမံကိန်းအတွင်းရှိကုမ္ပဏီပိုင် ပစ္စည်းကရိယာများ၊ အဆောက်အဦးများအား ဂရုပြုထိန်းသိမ်းရမည်။ Preventive နှင့် corrective maintenance ကိစ္စများအတွက် စီစဥ်၊ တာဝန်ခွဲဝေ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည်။ အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်အတွက်လိုအပ်သော အရင်းအမြစ် ( လူ၊ ကရိယာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ လိုအပ်သည်များကို ကြီးကြပ်ရေးမှူး ထံအကြံပြုတင်ပြရမည်။ စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်သော အပိုပစ္စည်းနှင့် လောင်စာဆီလုံလောက်စေရန် ကြီးကြပ်ရေးမှူး ၏အကူအညီဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်း၏ လောင်စာဆီကုန်ကျမှူသည် သတ်မှတ်ဘောင်အတွင်းရှိနေစေရန် ထိန်းသိမ်းရမည်။ စီမံကိန်းလုံခြုံရေး၊ အသုံးစရိတ်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ငွေပေးခြေမှုတို့နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကြီးကြပ်ရေးမှူး ကိုကူညီထောက်ပံ့ရမည်။
Project Officer (SAQ)
site အသစ်ရှာဖွေခြင်း၊ survey ဆင်းခြင်း၊ မြေပိုင်ရှင်များနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းစဥ်များအတွက် အစီအစဥ်ဆွဲခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ Project Officer များ၊ Site Hunters များကို site အသစ်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စီစဥ်ညွှန်ကြားရမည်။ GPS, compass, meter tape, camera စသည့်ပစ္စည်းကရိယာများအသုံပြုပုံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး site hunter များကိုသင်ကြားပြသပေးရမည်။ site acquisition activities, progress များကို tracker sheet မှာတဆင့်စစ်ဆေးညွှန်ကြားရမည်။ legal team, project team တို့နှင့်အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ မြေငှားနှင့် အခြားစာချုပ်စာတမ်းများအား စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက မြေရှင်များနှင့် ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်။ နေ့စဥ်စီမံကိန်းပြီးမြောက်မှုမှတ်တမ်းကိုကောက်ယူပြီး အစီရင်ခံစာပြုစုရမည်။
Site survey, site supervision, site handover ကိစ္စများနှင့်ပတ်သတ်၍ စီမံကိန်းအချိန်ဇယားကို ပြင်ဆင်စီမံနိုင်ရမည်။ Sub-contractor များကို ၎င်းတို့တာဝန်ကျရာ site ၏ civil work များနှင့်စပ်လျှဥ်း၍ ညွှန်ကြားရမည်။ client ဘက်မှကိုယ်စားလှယ်နှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ internal procedure အရ logistics, procurement, AC, HR, Admin, Account စသည့်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်ရမည်။ စီမံကိန်း၏ civil work များအားလုံးသည် client ဘက်မှအတည်ပြုထားပြီးသော specification, BOQ, drawing များအတိုင်းအတိအကျဖြစ်စေရန်ကြီးကြပ်ရမည်။ contract တွင်ပါဝင်သော ready mixed concerete, portable cement, excavation, back filling, compaction စသည်တို့သည် သတ်မှတ်ထားသော အင်ဂျင်နီယာစံနှုန်းပြည့်ဝစေရန် ကြီးကြပ်ရမည်။ စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်အခါ client ထံစီမံကိန်းလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်ကိုဆောင်ရွက်ရမည်။
Juinor Project Engineer (Electrical)
1SS Engineering Group
Site & Project အတွက် M&E လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ Technical Skill, Communication Skill, Interpersonal Skill ရှိရမည်။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိရမည်၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်နှင့်Teamwork အလိုက်အလုပ်လုပ်လိုစိတ်ရှိရမည်။
O&M Field Technician (Male -5Posts)
10KVA နှငျ့ 15000 KVA မီးအားပေးစက်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရပါမည်။ preventive & routine maintenance အချိန်ဇယားအတိုင်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အရေးပေါ်ပြသနာများကို သတ်မှတ်ထားသည့် SLA အတွင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ Site များအတွင်းသင့်တော်သော သန့်ရှင်းရေးနှင့် janitorial service များကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ Decommissioning, installation, trouble shooting တို့ကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ စက်သုံးဆီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ အထက်အရာရှိိကိုကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။
Assistant Engineer (For Pathein)
ပုသိမ် | ဧရာဝတီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း
- FTTH GPON Network နှင့် fiber optical cable တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရပ်စဲခြင်းနှင့် equipmentတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။ - FTTH GPON Network လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် တာဝန်ယူရမည်။ - Optical Distribution Network ၏ အစီရင်ခံချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် တာဝန်ယူရမည်။ - အောက်ဖော်ပြပါ စက်ကိရိယာများ (Fusion Splicer၊ OTDR၊ Optical Power Meter နှင့် Optical Light Source) နှင့်အလုပ်လုပ်ရမည်။ - ဖောက်သည်ဆိုက်များတွင် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် Optical Network Terminal (ONT) ကို တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် တာဝန်ယူရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Meal, Ph Bill နှင့် အခြားခံစားခွင့်များရမည်။
Site အသစ်ရှာဖွေခြင်း၊ survey ဆင်းခြင်း၊ မြေပိုင်ရှင်များနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းစသည့်တာဝန်များထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GPS, compass, meter tape, camera စသည့်ပစ္စည်းကရိယာများအသုံပြု၍ site survey ပြာလုပ်ရပါမည်။ site acquisition activities, progress များကို project coordinator ထံတင်ပြရမည်။ legal team, project team တို့နှင့်အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ မြေငှားနှင့် အခြားစာချုပ်စာတမ်းများအား စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက မြေရှင်များနှင့် ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်။ နေ့စဥ်စီမံကိန်းပြီးမြောက်မှုမှတ်တမ်းကို project coordinator ထံတင်ပြရမည်
မိမိတာဝန်ကျရာစီမံကိန်းရှိ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကြီးကြပ်ပေးပြီး client ၏စာချုပ်ပါအချက်အလက်များအတိုင်းဖြစ်စေရန်တာဝန်ယူကွပ်ကဲရမည်။ အရေးပေါ်ပြသနာများအား သတ်မှတ်ထားသော SLA အတွင်းဖြေရှင်းနိုင်ရန် NOC, field technician များအားပံပိုးကွပ်ကွဲပေးရမည်။ အခြေအနေများအား မိမိ၏အထက်အရာရှိနှင့် client ထံသို့အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ installation, maintenance, operation နှင့်ပတ်သတ်သော လုပ်ငန်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ခွဲဝေ၊ စီမံပေးရမည်။ Preventive နှင့် corrective maintenance ကိစ္စများအတွက် စီစဥ်၊ တာဝန်ခွဲဝေ၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည်။ အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်အတွက်လိုအပ်သော အရင်းအမြစ် ( လူ၊ ကရိယာ၊ စက်ပစ္စည်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ လိုအပ်သည်များကို မန်နေဂျာထံအကြံပြုတင်ပြရမည်။ စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်သော အပိုပစ္စည်းနှင့် လောင်စာဆီလုံလောက်စေရန် မန်နေဂျာ၏အကူအညီဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။ စီမံကိန်း၏ လောင်စာဆီကုန်ကျမှူသည် သတ်မှတ်ဘောင်အတွင်းရှိနေစေရန် ထိန်းသိမ်းရမည်။ စီမံကိန်းလုံခြုံရေး၊ အသုံးစရိတ်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ငွေပေးခြေမှုတို့နှင့်ပတ်သတ်ပြီး မန်နေဂျာကိုကူညီထောက်ပံ့ရမည်။
• Networking Knowledge ရှိရမည် • Auto CAD (2D) နှင့် Microsoft Office အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Design Communications International Co.ltd.
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
Site & Project အတွက် M&E လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျွမ်းကျင်ရမည် Technical Skill, Communication Skill, Interpersonal Skill ကောင်းရမည် အကောင်းမြင်စိတ်၊ အပြုသဘောဆောင်သော စိတ်ထားရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စိတ်ဓာတ်ရှိရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Rewards for over performance
Assistant Fiber Technician (Daily Wages)
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
• အလုပ်ကို ရိုသား/ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ • ရန်ကုန် မြို့နယ်များအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်န်ိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • ဓာတ်တိုင်များပေါ် တွင် ဆက်သွယ်ရေးကြိုးများသွယ်တန်းတပ်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
တင်သောနေ့: 21 Nov 2021
Operation & Maintenance Team Leader
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
- ဆိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုများအတွက် မည်သည့်တာဝန်များကိုမဆို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် O&M အဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်းရမည်။ - O&M PM လုပ်ဆောင်ချက်များ alarmနှင့်သက်ဆိုင်‌‌ေသာ Corrective interventions နှင့် Reactive interventionsများကိုတာဝန်ယူ၍Telecom Infrastructure ၏ faults troubleshootingနှင့်restorations များတဆာင်ရွက်ရမည် - Camusat Operation Center နှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ - အစီရင်ခံစာများကို မှန်ကန်၊ တိကျပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြီးမြောက်ရန် တာဝန်ယူရမည်။ - ဒေသမရွေးသွားလာနိုင်ရမည်။ - ဆီဖြည့်ရန် တာဝန်ယူရမည်။
အကျိုးအမြတ်: *Bonus *Arrangement for Allocation
Recruiter active6days ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
- Site ရှိ Team Leader အား လိုအပ်သော အကူအညီများ ပေးဆောင်ရမည်။ - (လေနှင့် လောင်စာဆီ filters များ ပုံမှန်လဲလှယ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်ဆီဖြည့်ခြင်း၊ DG သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း)အစရှိသော ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု များအတွက် တာဝန်ယူရမည်။ -Site alarm များ၊ DG fault များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အရေးပေါ် fueling ကိစ္စ များဆောင်ရွက်ခြင်း။ - Camusat Operation Center နှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ - အစီရင်ခံစာများကို မှန်ကန်၊ တိကျပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြီးမြောက်ရန် တာဝန်ယူရမည်။ - ဒေသမရွေးသွားလာနိုင်ရမည်။ - ဆီဖြည့်ရန် တာဝန်ယူရမည်။ - Responsible for preventative maintenance (regular replacement of air & fuel fitters, engine oil, DG cleaning). - Responsible for cooling site alarms, fixing DG faults and emergency refueling.
အကျိုးအမြတ်: *Bonus + Perfect Performance
Customer Service Technician(Transformer And Panel)
လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
 သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အာမခံထားသည့် အချက်များနှင့် အညီ ထရန်စဖော်မာအား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။  စက်ရုံတွင် ထရန်စဖော်မာအား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။  After-Sales services အရ လိုအပ်သည့် ပြုပြင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးရန် နှင့် လိုအပ်သလို မှတ်တမ်းပြုစုထားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္  အသုံးပြုနေသည့် စက်ပစ္စည်းများကို Calibration လုပ်ခြင်းနှင့် QMS/EMS လိုအပ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္
တင်သောနေ့: 08 Nov 2021
Engineer (OJT) - (20 Posts)
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
- Engineer ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ကြားပေးမည်။ - ရေရှည်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
တင်သောနေ့: 02 Nov 2021